Antalya 3. Mashruuca Tareenka Nidaamka Raadinta Heerka RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean07 AntalyaAntalya 3. Gawaarida ayaa la bilaabay Mashruuca Nidaamka Isgoyska marxaladda
Antalya 3. Gawaarida ayaa la bilaabay Mashruuca Nidaamka Isgoyska marxaladda
24 / 09 / 2018 07 Antalya, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, TURKEY, taraamka
Gawaarida waxaa la bilaabay in lagu dhejiyo 25 kilomitir 3 Mashruuca Marxaladda Marxaladda ee Varsak iyo Zerdalilik, oo sii waday xawaare sare. Wejiga koowaad ee mashruuca ka dhexeeya Varsak-Otogar ayaa la qorsheeyay in la dhameeyo Diisambar.
Duqa magaalada Menderes Turel, oo sii waday inuu ku duugo Antalya oo leh habka casriga ugu badan ee gaadiidka dadweynaha, 3, ayaa siin doona xal waara oo casri ah oo gaadiidka magaalada ah. Mashruuca Nidaamka Tareenka marxaladda 3 u dhexeeya Varsak iyo Zerdalilik oo ah mashruuca ugu weyn ee Antalya oo leh ilaha guud. Mashruuca Nidaamka Isgoyska marxaladda ayaa si tartiib ah u socdaa.
Gubashooyinka ugu horreeya ayaa bilaabay in la dhigo
25 kilomitir 3 u dhexeeya Varsak iyo Zerdalilik. Mashruuca Nidaamka Isgaadhsiinta ee Etap, waxaa lagu bilaabay in lagu rakibo aagga Varsak. Qadka tooska ah, cabiraadda ayaa la sameeyay iyo baqshiinka hoose ee tareenka ayaa la bilaabay. Dhanka kale, dariiqa tareenka ayaa la bilaabay, iyadoo dhinaca kale ay ka socdaan shaqooyinka dhaadheer ee qiiqa. Inta u dhaxaysa Gawaarida Gawaarida ee Sakarya Bulvary, rakibidda tubooyinka biyaha lagu dhajiyo iyo wax soo-saar buuxa ayaa si dhaqso leh u socda.
Marxaladda koowaad ee bisha December
3 u dhaxeeya Assumption iyo Zerdalism. Waxa uu sheegay in marxaladda koowaad ee Mashruuca Nidaamka Isgoyska marxaladda, qaybta ilaa Varsak-Otogar ay ku xiran yihiin nidaamka jira. Dhammaadka Diseembar, khadkan ayaa la geyn doonaa. Ka hor doorashooyinka degaanka ee 2019, xariiqda ilaa jaamacadda ayaa la qorsheeyay in la dhammeeyo.
Xarunta 39 ayaa soo bandhigi doonta
Laga soo bilaabo Kepez Varsak iyo ku biirida khadka tareenka ee Isbitaalka Tababarka iyo Cilmi baarista ee Meltem, 3. Mashruuca Nidaamka Isgoyska marxaladda, waxaa jiri doona wadarta xarumaha 38 oo ay ka mid yihiin 1 iyo xarumaha dhulka hoostiisa ee 39. Khadka, oo ka bilaabi doona hoolka hore ee magaalada, wuxuu sii wadi doonaa Süleyman Demirel Boulevard, Sakarya Boulevard, Xarunta Jidka Busta, Dumlupinar Boulevard, Faculty of Medicine, Meltem, Isbitaalka iyo Cilmi-baarista iyo Isxaaqda, halkaas oo lagu dari doono taraamka qadiimka ah ee nostalgia. Baaxadda mashruuca, khadka tareenka ee nostalgia ee u dhexeeya Matxafka iyo Zerdalilik ayaa dib loo cusbooneysiin doonaa bilawgii waxaana loo qorsheeyay safar wareeg ah.
Nidaamka tareenka si uu u qabsado magaalada
Antalya 3. Mashruuca Nidaamka Isku-dhafka ee Etap Railway ayaa laga heli doonaa gobolka Varsak, kaas oo ku yaal waqooyiga magaalada, goobaha muhiimka ah sida Saldhigga Basaska, Isbitaalka Jaamacadda, Jaamacadda Jaamacadda, Maxkamadda, Aqoonta iyo Cilmi-baarista ee ku taal galbeedka magaalada. 1. Tartanka Marxaladda-Kepezalti iyo 2. 3 kaas oo lagu dari doono xarumaha Etap Meydan-Airport-Aksu. Mashruuca Nidaamka Isgoyska marxaladda, waxaa la abuuri doonaa hareeraha ku wareegsan Antalya. Dhererka guud ee nidaamka tareenka ee ku yaala Antalya ayaa gaaraya 55. Nidaamyada waxaa lagu qorsheynayaa in ay isku raacaan rakaabka iyo baabuurta.
Qiimaha Kepez ayaa kordhaya
3, oo fududayn doonta gaadiidka magaalada. Mashruuca Nidaamka Isgoyska marxaladda ayaa kor u qaadi doona qiimaha gobollada wadada. Inta badan xariiqda ayaa ka gudubta xudduudaha degmada Kepez. Inkasta oo qiimaha guryaha iyo goobaha ganacsiga ay kordhayaan meelaha ay xaruntu ka baxdo, xaafadaha degmada Kepez waxay heli doonaan qiimo weyn.
Antalya 3. Rails on Line Nidaamka Tareenka Marxaladda…
Khadka Xawaare Sare ee Sare ee Koonfur-galbeed Shiinaha…
Mashruuca Maalinta Saxiixa ee Antalya 3 Mashruuca Nidaamka Tareenka marxaladda
Antalya 3. No Stop at Night ee Mashruuca Nidaamka Isgoyska marxaladda
Ogeysiinta Udir: IZMIR SIYAASADAHA Nidaamka Nidaamka
Antalya 3. Mashruuca Nidaamka Tareenka marxaladda
Mashruuca Nidaamka Isgaadhsiinta Saldhig Varsak
Mashruuca Varsak- Zerdalilik Rail System
RayHaber 24.09.2018 Warbixinta Shirka
Mashaariicda lagu Xallinayo Dhibaatada Gaadiidka ee ka jirta magaalada Muqdisho